A uhlobo "ubuso" yenkampani ngayinye noma ibhizinisi Akukhona ukubukeka abasebenzi. Isimo elikhulu ubhekwa yokufuna nezingubo zokusebenza ezikhangayo, imithetho ngokugcwele ne izimo abasebenza endaweni ethile.
Kuze kube manje, yonke imikhiqizo zihlukaniswe ngezigaba ezimbili eziyinhloko kuye ngokuthi inkathi - ihlobo nobusika. izici zayo imifaniswano, yenzelwe ukusetshenziswa zasehlobo, babe kalula futhi ubuhlakani. Ngesikhathi esifanayo, lezi zici musa kwenze ukuthi ungabi ukungenwa umonakalo noma ikhwalithi. The main ehlobo aphoyintimenti zokugqoka ekhethekile zihlanganisa:
Ochwepheshe Esinokwethenjelwa Ukuvikelwa kusukela amazinga aphakeme okushisa kulandela ukushisa unhlangothi;
ukunciphisa imiphumela emibi amazinga aphezulu umswakama, uthuli nezinye izinto zemvelo.
Izinzuzo imikhiqizo ehlobo
izingubo ezikhethekile, in ezahlukene okwethulwa http://specteks-plus.ru/letnyaya-specodejda kwesigaba yakhelwe kokubili amadoda nabesifazane. Abameleli beNdikimba ubulili namandla zibizwa le ovaloli eziningi ukusebenza, izikhulu zokubhukuda ukhululekile zokuphepha, smocks, amaphinifa, uwumnikazi wenkampani, izigqoko kanye nezicathulo. Mayelana nemikhiqizo kwabesifazane kulesi sigaba ubuswa amaphinifa, imodeli wathungela. Kuwufanele sokunaka khona imikhiqizo jikelele, okuyizinto athandwa phakathi bobubili ubulili.
Zonke ihlobo izingubo ezikhethekile ekhiqizwa yizimboni zesimanje, ine izici ezilandelayo:
it libhekene isikhathi nokusebenza isikhathi eside, ukugqoka ukumelana, ikakhulukazi yokuhlanza dry njalo, kalula yesondlo, kalula zokuhlanzwa zonke izinhlobo ukungcola, ukumelana ukusonteka ngemishini;
cut khulula, esinikela esiphezulu induduzo ochwepheshe phakathi nokwenziwa kwemisebenzi esemthethweni kule sizini hot;
inani elikhulu onobuhle, ukuvumela inkampani ngayinye ukukhetha ikhambi eliyingqayizivele ehambisana imininingwane yemisebenzi yayo. Ikakhulukazi, kufanele njengoba umoya permeable futhi hygroscopic, okuyinto kunciphisa amathuba umonakalo emzimbeni womuntu ngenxa amanzi emzimbeni;
ngemali ephansi, okuyinto eyenza amabhizinisi kalula ahlinzeke izinga umfaniswano wonke amalungu abasebenzi.
Lesitshalo zokugqoka ekhethekile
Ngokuyinhloko kuyafaneleka umphumela izimfanelo ehlobo iyunifomu legatsha kwenhlangano. Ngokwesibonelo, uma kuziwa amasevisi umsebenzi, izingubo zabo cishe akazange ziyahlukahluka ngezikhathi ezahlukahlukene onyakeni. Ngesikhathi esifanayo, kukhona abasebenzi abaningi baphoqeleka ukusebenzisa ihlobo nobusika amasethi nemifaniswano ukuthi babe umehluko othize. Ziyakwazi Ochwepheshe, indawo kabani lomsebenzi lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela ibhizinisi noma Umbuso inkonzo. Ngaphezu kwalezi, yemisebenzi ezidinga ukusetshenziswa izingubo ezikhethekile isizini efudumele, kukhona abakhi, bomlilo, odokotela abasebenza egunjini labadinga usizo oluphuthumayo, abasebenzi imoto.
Yini imikhiqizo ngokwesiko uthanda ucansi namandla kushisa? Abakwazi ukukwenza ngaphandle jackets obusebenzayo ifakwe eziningi emaphaketheni, amasudi imijiva nge esiwuhogelayo Indwangu Esekelwa. Kungaba kubhekwe Irreplaceable izikibha ngemibala ehlukahlukene kanye ngokuvamile cut khulula. Ayikwazi ukwenza ngaphandle headgear - baseball amakepisi, noma namakepisi uqiniseka ukusebenzisa abasebenzi abasebenza emgwaqeni, ikakhulukazi endaweni evulekile. Kubalulekile izihloko ukukhumbula Ukuvikelwa spilkovye okufakiwe kanye balaclava wathungela.
Ngakwelinye ihlangothi, abesifazane ozama ukuthola izingubo ezikhethekile, egcizelela isithunzi sibalo. Ngaphezu kwalokho ama-ovaloli, amajazi, zokubhukuda zivame akhethiwe inhlanganisela ukukhanya ezindizayo blouses umphetho wengubo sakuqala elicacisiwe isitayela yenkampani. Nokho, kuyinto efiselekayo ukuthi abesilisa nabesifazane oluhambisana ubuqili kulencane nemifaniswano, kuhlanganise hlangothi, wenza umbala ongaphakeme-key. Lokhu kuvumela naye hhayi ukuba amehlo kakhulu, futhi kube inzuzo kakhulu ukukhishwa ngesikhathi esifanele kanye nekhwalithi imisebenzi. Ngaphezu kwalokho, amathoni amnyama neqhaza ilanga Push-udonse, okungakwazi avume ukuba labo abasebenza emgwaqeni.
Neat, ukubukeka lungisa kwabasebenzi yenkampani - isihluthulelo nokubambisana yimpumelelo nabantu okungahle babe amakhasimende. Umphumela kumiswa ezingqondweni amakhasimende nesibambisene nabo okuvelayo omuhle mayelana inhlangano.
Inhlanhla kuwe ukukhetha!
Gear okusalungiswa: injongo nezinhlobo